Nissan waxay albaabka ufureysaa Apple si ay usoosaarto gaariga Apple | Waxaan ka socdaa mac
Nissan waxay albaabka ufureysaa Apple si loo sameeyo gaariga Apple
Dhowr saacadood ka hor waxaa lagu sharraxay shabakadda in Apple uu xiriirka u jaray shirkadda Hyundai Motors si ay u fuliso soo saarista Apple Car, gaariga Apple wuxuu saaran yahay bushimaha qof kasta oo macquul ah. shirkadaha gawaarida ma rabaan inay seegto si ugu yaraan loola xaajoodo Apple.
Dhexdhexaadinta lafteeda Nikkei Wuxuu sharraxay in shirkadda Cupertino ay gorgortan ama wadahadal la galeyso ilaa lix shirkadood oo ka tirsan waaxda oo ku taal Japan, dhammaantoodna laga gaarayo is afgarad ku saabsan soosaarida suurtagalka ah ee baabuurkan. Marka laga hadlayo Nissan oo aan ku qorneyn mid ka mid ah shirkadaha ku jira liiskan si ay ula kulmaan Apple, Hadda waxay taagan tahay marxaladda iyadoo ay ugu mahadcelineyso weedhaha agaasimaheeda, Makoto Uchida.
Marka laga hadlayo wadaxaajoodka, ma jiro wax rasmi ah oo ka soo baxay oo si fudud u dhacay waxaa la isla dhexmarayaa shirkadaha suurto galka ah ee gorgortanka la galay ama wadahadalada kula jira Apple. Kia, taas oo sidoo kale ka mid ahayd shirkadaha suurtagalka ah ee loo diyaariyey inay bilaabaan ganacsi waxay umuuqdaan inay dhinac taagan yihiin hadda ... Wax walba waa cagaar ama ugu yaraan taasi waa dareenka aan ka haysanno bannaanka iyo tirada noocyada sida soosaara suurtagal ah ee loo maleynayo gaadhigu wali aad buu u sareeyaa markaa wali lama yaqaan.
Waxa cad waa taas Nissan waa mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee awood u leh soo saarida gaarigaan Apple sida ay yihiin magacyada ku hoos jira dalladda PSA Group ama General Motors. Opera saabuunku ma istaagayo ilaa Apple run ahaantii ay soo saarto war rasmi ah iminkana ma jiraan wax faahfaahin ah ama xog muhiim ah oo ah hal nooc ama mid kale oo mas'uul ka ah soo saarista Apple Car.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Nissan waxay albaabka ufureysaa Apple si loo sameeyo gaariga Apple